सौन्दर्य Archives - बडिमालिका खबर
पदमबहादुर सिंह/बाजुरा : बाजुराका बजार हुन् वा डाँडापाखा, सबै हिउँले छपक्क छन् यतिबेला। अरूबेला कहिले फुस्रा त कहिले हरिया देखिने डाँडापाखा अहिले सेताम्मे छन्। जंगलका बोटविरुवामा कपास टाँसेजस्तो लाग्छ। खुला जमिन होस् वा डाँडामा सेतो कार्पेट बिछ्याएजस्तो देखिन्छ। हिउँ खेल्न पुग्नेहरूलाई हिउँको तन्ना बिछ्याएझैं लाग्दा छोडेर घर नफर्किउँ जस्तो लाग्छ। अहिले उक्त क्षेत्र पनि हिउँले स्वर्ग […]
हाम्रो जीवनशैलीको हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै ठूलो असर पार्ने गर्छ । हामीले दैनिक अपनाउने केही बानी यस्ता हुन्छन् जसका कारण बुढेसकालको लक्षण समय अगावै देख्न थाल्छ । हामी आज तपाईंलाई यस्ता बानीबारे जानकारी दिँदै छौं जसले हामीलाई समय अगावै बुढो बनाउन सक्छ, यस्ता बानीलाई हामीले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । स्ट्रबाट पिउनुः जब हामी कुनै ड्रिङ्क […]
जाडोमा अनुहार सुन्दर बनाउने जुक्ति
सानु थापा–सुन्दर अनुहार सबैलाई मनपर्छ। त्यसैले सुन्दर र आकर्षक हुने चाहना राख्नु मानिसको स्वभाव नै हो। तर समय अनुसार सही तरिकाले मेकअप गर्न जानिएन भने अनुहार झनै कुरुप हुनसक्छ। त्यसैले मौसम अनुसार अनुहारको स्याहार तथा मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जाडो महिना छ। जाडो मौसममा अनुहारलाई सुन्दर र आकर्षक बनाइराख्न के गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा यहाँ […]
मानिस बुढो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । बालक, युवा, अधवैशे हुदै मानिस बुढो हुन्छ । तर कतिपय मानिस भने उमेर नपुग्दै बुढो देखिन्छ । आखिर किन उमेर अगावै मानिस बुढो देखिन्छ त ? आजकलको खराब जीवनशैली, खानपान, खराब सोच चिन्तनले मानिसलाई उमेर अगावै बुढ्यौलीमा पुर्‍याउँछ । समय अगावै बुढो हुनबाट बच्न के गर्ने त ? […]
डन्डिफोर कहिल्यै निको भएन ? अब गर्नुस् यी ४ सरल उपाय
एजेन्सी — अनुहारमा डन्डिफोरको समस्याबाट धेरै मानिसहरु पीडित हुन्छन् । डन्डिफोर आउने र यसको दाग बस्ने भएकाले अनुहारलाई कुरुप बनाइदिन्छ । मानिसहरु डन्डिफोर निको बनाउन थुप्रै उपायहरु पनि अपनाउने गर्छन् । डन्डिफोर थुप्रै कारणले आउने गर्छ । किशोरावस्थामा देखिने डन्डिफोरको समस्या शरीरमा हर्मोनको परिवर्तन आउँदासम्म रहीरहन्छ । हर्मोनमा आउने परिवर्तनले अनुहारमा डन्डिफोर आउने गर्छ । […]
एजेन्सी – सामान्यतयाः जाडोको मौसम सुरु भएसँगै ओठ फुट्ने समस्या पनि शुरु हुन्छ । जाडोको समयमा हावा सुख्खा हुने र यसको स्पर्श छालामा पर्दा छाला पनि सुख्खा हुने गर्छ । जाडोको समयमा सुख्खा हावा बाहेक अन्य कारण पनि ओठ फुट्ने समस्या आउँछ । अन्य के कारणले ओठ फुट्छ भनेर सामान्यतयाः कम मात्र मानिसहरुलाई थाहा हुने […]
लिपस्टिक अर्थात महिलाहरुको सौन्दर्यको एक अभिन्न हिस्सा । ओंठको सौन्दर्य कायम राख्न लिपस्टिकको प्रयोग हुँदै आएको छ । अनुहारको मेकअपमा लिपस्टिक अनिवार्य जस्तै हुनेगर्छ । लिपस्टिकको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? कहिलेबाट सुरु भयो ? यावत् कुरा निकै घतलाग्दा छन् । त्यसैगरी लिपस्टिकसँग जोडिएका अन्य कुराहरु पनि निकै रोचक छन् । सुरुका दिनहरुमा यसलाई लिपस्टिक […]
हरेक विवाहित सम्बन्धमा स–साना समस्या हुनु भनेको साधारण हो तर यदि यी स–साना समस्या समय हुँदा नै हल गरिएन भने यसले विकराल रुप लिन बेर लगाउँदैन । धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो नीजि जीवनबारे खुलेर कुरा गर्नबाट बच्छन् । यी समस्यालाई टाढा राख्नका लागि रिलेशनशिप एक्सपर्टका केही सल्लाह मानिसहरुलाई काम लाग्न सक्छ । आउनुहोस् यसबारे जानकारी लिऔं […]
यस्ता ६ गुण भएका युवती हुन्छन् भाग्यमानी
शास्त्रलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो जीवन पद्धतिका विषयमा विभिन्न जानकारी गराइएको हुन्छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन समेत गरेको पाइन्छ । समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि ब्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरिएको छ । त्यसकै आधारमा कुनै व्यक्तिको भविष्यबारे पनि फलादेश गरिन्छ । शिव […]
हामीसँग कतिपय यस्ता प्राकृतिक विधी छन्, जो सौन्दर्यदेखि स्वास्थ्यसम्म लाभदायक मानिन्छ । जस्तो कि, पानीको वाफ । एकदमै सरल र छरितो विधी हो यो । सफा पानी उमालेर त्यसैको वाफ लिन कतिपनि गाह्रो छैन । जबकी यसले अनेक लाभ मिल्छ । रुघाखोकी लागेको छ भने त पानीको वाफले निकै प्रभावकारी काम गर्छ । नाक बन्द […]
बुहारीको आधुनिक पहिरनप्रति सासुको गुनासो
सुशीलाको विवाह तीस वर्ष अगाडि एउटा गाउँको युवकसँग भएको थियो । ती दिनहरुमा आफूले भोगेका कठिनाईलाई सुशीला प्राय: सम्झिरहन्छिन् । सुशीलाकी सासुले उनलाई हरेक समय टाउकोमा घुम्टो राखिरहन भन्थिन् । पढेलेखेकी सुशीलालाई त्यस्तो अवस्थामा रहन निकै कठिन थियो । विवाहको केही समयपछि सुशीला श्रीमानसँगै जागिरको सिलसिलामा शहर आएपछि सुशीलाले राहतको सास फेरिन् । सुशीला अब […]
प्रकाश सिंह बाजुराको धार्मिक तथा पर्यटकिय बुढिनन्दा क्षेत्र प्रचारमा आउन सकेको छैन् । हरियाली पाटन, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरीपुर्ण छ, सधै बुढिनन्दा बसौ जस्तो लाग्छ । बुढिनन्दा जान ग्राहो र समय लाग्ने भएपनि त्यहा पुग्दा भने दुख कष्ट सबै मेटीएर आन्नद आउने गरेको छ । सौन्दर्यको धनी भएपनि बुढिनन्दा प्रचार प्रसारको भने निकै कमि रहेको छ […]
दिल खोलेर हाँस्नोस्, यस्ता छन् फाइदै फाइदा
काठमाडौं – हाँसोले मानिसलाई शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ बनाउँछ । सले मानसिक तनाव हटाउन मद्दत गर्नुका साथै रोग प्रतिरोधी क्षमतामा पनि वृद्धि गर्छ । दैनिक ४५ मिनेटसम्म हाँस्नाले मानिसमा भएको तनाव कम हुन्छ । साथै अप्ठेरा परीस्थितीसंग जुध्ने क्षमतामा वृद्धि गर्दछ । हाँसोले मानिसको ब्यक्तित्व समेत झल्कन्छ । हाँसोले मानिसलाई शारीरिक तथा मानसिक रुपमा […]
काठमाडौं । बर्सातको मौसममा अनुहारमा पिम्पल आउनु सामान्य मानिन्छ । तर जसको त्वचा ओइली हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले हरेक मौसममा पिम्पल आउने समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । कस्मेटिक उपायबाट केही समयका लागि यसलाई ठीक गर्न त सकिन्छ, तर केही समय पछि पुनः पिम्पल देखिन थाल्छ । यसको अतिरिक्त कस्मेटिक साह्रै महंगा पनि हुन्छन्, र यीनमा मिसाइको रसायनले […]
काठमाडौं। तपाईलाई थाहा छ श्रीमती कति किसिमका हुन्छन् ? बौद्ध ग्रन्थमा श्रीमतीका प्रकार बारे एउटा रमाइलो वर्णन भेटिएको छ । भगवान गौतम बुद्ध आफैले सात किसिमका श्रीमतीहरूको बारेमा बयान गरेका हुन् । कुरा गौतम बुद्धले धर्म प्रचार गरिरहेको बेलाको हो । त्यस कालमा अनाथपिण्डिक नामका एक व्यक्ति थिए । उनी आफै, उनका छोरा र दुई […]
प्राय जसो बिहे पछी महिलाहरुको शारीरिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख सकिन्छ । साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । सामान्य तय अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हिप र स्तनको आकारमा धेरै परीवर्त भएको […]
सामान्य गहनाले पनि बढाउँछ सौन्दर्य
दिनहुँ प्रयोग हुने गहना हल्का किसिमको भयो भने त्यसलाई लगाउन पनि आरामदायक हुन्छ र सम्हाल्न पनि सजिलो । सामान्य किसिमका गहनालाई हरेक प्रकारका पहिरनमा लगाएर हिँड्न सकिन्छ । त्यस्ता गहनाले तपाईंलाई भद्दा देखिँदैन, उल्टो झन् सुन्दर र अरुभन्दा फरक देखाउँछ । आज हामी तपाईंलाई दिनहुँ कस्तो प्रकारका मिनिमल ज्वेलरीको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी […]
स्वास्थ्य विज्ञान जानौं, सधैं निरोगी रही दीर्घायु बनौं
विश्वमा प्रचलित विभिन्न चिकित्सा पद्धतिको मूल लक्ष्य मानिसलाई निरोगी तुल्याउनु हो । मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएकाले रोग लागेपछि औषधि गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने उपाय अपनाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो दैनिकीमा केही सरल उपायहरू अपनाउँदा स्वावलम्बी हुनुका साथै स्वस्थ, तन्दुरुस्त एवं दीघार्यु रही खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ । विश्वमा प्रचलित विभिन्न चिकित्सा पद्धतिमध्ये खानपानसम्बन्धी […]